ALTBalaji – Networks – Alpha Premium
Code M ##unicode ဒီတစ်ခါမှာ အိန္ဒိယကားကောင်းကောင်းလေးတစ်ကားကို ညွှန်းမယ်ဗျာ.. ကားနာမည်လေးက Code-Mတဲ့ Code-Mဆိုတာ စစ်သုံးစကားတစ်ခု Court Martial ကိုဆိုလိုတာပါ ..စစ်ခုံရုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပေါ့... စစ်ခုံရုံးဆိုတဲ့ အတိုင်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ခုံရုံးတင်ဖို့ အမှုလိုက်တဲ့ ကားလေးပေါ့... ဒီကားလေးရဲ့ အစမှာ အဆေ့ဖ်နဲ့ ကာလစ်ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားနှစ်ယောက်ကို ဗိုလ်မှုး အဂျေး,ရှက်တီနဲ့ ဂေါ်ရုတို့ကနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတာကနေ စတယ် ...နောက်တော့ အဆေ့ဖ်နဲ့ ကာလစ်တို့ကို နှိမ်နှင်းလိုက်နိုင်ပြီးမထင်မှတ်ပဲ အဂျေးကပါ အသတ်ခံလိုက်ရတယ်..အဲ့ဒီလို အဂျေးအသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ အဆေ့ဖ်နဲ့ ကာလစ်တို့ရဲ့ အမေ စစ်စခန်းထိလာပြီး သူရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကာလစ်နဲ့ အဆေ့ဖ်တို့ဟာ အကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ကြောင်း ဆန္ဒပြရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့သတ်သေလိုက်တယ်.. အဲ့လိုနဲ့ အဆေ့ဖ်နဲ့ ကာလစ်တို့က တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက်သမားလား..အကြမ်းဖက်သမားသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဂျေးကို သတ်ခဲ့တာက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ ..အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကြောင့် အဂျေးတို့ အမှုကိုကိုင်ဖို့ စုံစမ်းရေးအရာရှိ မိုနီကာ အဲ့ဒီစစ်စခန်းကို ရောက်လာခဲ့တယ်..အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီး မိုနီကာက နည်းမျိုးစုံနဲ့ အမှုမှန်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ်... အဆေ့ဖ်နဲ့ ကာလစ်တို့ဟာ တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက်သမားတွေလား.. အဂျေးကို သတ်တဲ့ သူက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ...ဒီအမှုမှာ ...
Mum Bhai ကဲ.. Mum-Bhai ဆိုတဲ့စီးရီးလေးလာပြီ... မွမ်ဘိုင်းဆိုတဲ့ ကားနာမည်ဆိုတဲ့ အတိုင်း မွမ်ဘိုင်းရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံတွေကို သေချာရိုက်ပြထားတဲ့ မြှုပ်ကွက်ပေါတဲ့ ဇာတ်ကားလေး..မွမ်ဘိုင်းလို့ မြို့ကို မခေါ်တွင်ခင် ဘုံဘေ လို့ခေါ်တွင်ကတည်းက မြို့ရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ဂိုဏ်းရန်ပွဲတွေ အလောင်းတွေ လုယက်မှုတွေနဲ့ မြို့ကြီးဟာ ညစ်ပတ်ပြီး စည်းလွတ်ဝါးလွတ်ဖြစ်နေတာပေါ့.. အစိုးရဟာ ဟန်ပြသက်သက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး..ဥပဒေဟာ ဒုစရိုက်လောကသားတွေရဲ့ လက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်...အဲ့ဒီအချိန် မှာ ရဲတွေထဲကမှ ဘုံဘေမြို့ကို ပြန်ပြီး သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့.. အထူး တပ်ဖွဲ့ အေတီအက်စ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တော့တယ်. အေတီအက်စ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ကရီကာဆိုတဲ့ ဘဲကြီးပေါ့..သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က " မဖမ်းဆီဘူး..အသေပစ်သတ်တာ"ဆိုတာပဲ.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ မင်းသား ကလည်းဘက်စကာဆိုတဲ့ ကလေးလေးပဲရှိသေးတာပေါ့... သူ့မြို့ကသူ့ကိုစာသင်တဲ့ဆရာက သူ့အမေကို ထိကပါးရိကပါးလုပ်လို့ဆိုပြီး လက်ကိုအချွန်နဲ့ ထိုးကာ ဘုံဘေမြို့ကို ထွက်ပြေးလာတော့တယ်... သူတို့မိသားစုနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ ရာမဆိုတဲ့ သူဆီကိုပေါ့..ရာမနဲ့သူဟာ ညီအကိုအရင်းလိုသိပ်ချစ်ကြတယ်.. ရာမက သူ့ကို အရွယ်မရောက်ခင် အလုပ်လုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီး သူ့အသိရဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာ သန့်ရှင်းရေးအလုပ်အပ်ပေးခဲ့တယ်..အဲ့ဒီမှာဆိုင်ကို လာတဲ့ ရဲတစ်ယောက်နဲ့ ဘက်စကာနဲ့တွေ့ပြီး ပညာဆက်သင်ခွင့်ရတော့တယ်..ဘက်စကာဟာ စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ပညာရှာရင်းကနေ နောက်ဆုံးတော့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ လက်ဖြောင့်ချကိတွေကြောင့် အေတီအက်စ် အထူးတပ်ဖွဲ့ ...
Paurashpur ##unicode ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ၁၆ ရာစုခေတ်က ပါရာစပါတိုင်းပြည်မှာ ဇာတ်လမ်းတည်ထားပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာဆိုရင် မိန်းမတွေဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရပြီး ယောက်ျားတွေကို ဘုရားသခင်လိုကိုးကွယ်ရပါတယ်။ ယောက်ျားသေသွားရင် မုဆိုးမဖြစ်သွားတဲ့မိန်းမဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မီးရှို့ပြီးသတ်သေရပါတယ်။ အဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘုရင်ကလည်း အသက်ကြီးသလောက် တဏှာကြီးတဲ့မင်းဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာမိဖုရားကြီးတစ်ပါးရှိပြီး နောက်ထပ်တော်ကောက်သမျှမိဖုရားတိုင်းဟာ နန်းတော်ကနေ ပျောက်ပျောက်သွားကြပါတယ်။ အဲ့မိဖုရားတွေ သေသလား၊ ရှင်သလား၊ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ နန်းတော်ထဲက တော်ဝင်မိသားစုကလည်း အပြုံးတွေဆင်မြန်းထားကြပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာကျိတ်ကြံနေတဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ပေါ့။ မိဖုရားတွေပျောက်ဆုံးနေရတဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ သပွတ်အူလိုရှုပ်နေတဲ့ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အာဏာလုမှုတွေကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ (18+ အခန်းနည်းနည်းပါတော့ မိသားစုတဲ့တူတူမကြည့်သင့်ပါဘူး) ##zawgyi ဒီဇာတ္လမ္းတြဲကေတာ့ ၁၆ ရာစုေခတ္က ပါရာစပါတိုင္းျပည္မွာ ဇာတ္လမ္းတည္ထားပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာဆိုရင္ မိန္းမေတြဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရၿပီး ေယာက္်ားေတြကို ဘုရားသခင္လိုကိုးကြယ္ရပါတယ္။ ေယာက္်ားေသသြားရင္ မုဆိုးမျဖစ္သြားတဲ့မိန္းမဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္မီးရႈိ႕ၿပီးသတ္ေသရပါတယ္။ အဲ့လိုတိုင္းျပည္ကိုအုပ္စိုးတဲ့ဘုရင္ကလည္း အသက္ႀကီးသေလာက္ တဏွာႀကီးတဲ့မင္းဆိုးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မွာမိဖုရားႀကီးတစ္ပါးရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ေတာ္ေကာက္သမွ်မိဖုရားတိုင္းဟာ နန္းေတာ္ကေန ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားၾကပါတယ္။ အဲ့မိဖုရားေတြ ေသသလား၊ ရွင္သလား၊ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ ဘယ္သူမွမသိၾကပါဘူး။ နန္းေတာ္ထဲက​ ေတာ္ဝင္မိသားစုကလည္း အၿပဳံးေတြဆင္ျမန္းထားၾကေပမဲ့ ကြယ္ရာမွာက်ိတ္ႀကံေနတဲ့ အရႈပ္အေထြးေတြနဲ႔ေပါ့။ မိဖုရားေတြေပ်ာက္ဆုံးေနရတဲ့ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရင္ကဘာလဲဆိုတာနဲ႔ သပြတ္အူလိုရႈပ္ေနတဲ့ ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕အာဏာလုမႈေတြကို စိတ္ဝင္တစားၾကည့္ရမယ့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ (18+ အခန္းနည္းနည္းပါေတာ့ မိသားစုတဲ့တူတူမႀကည့္သင့္ပါဘူး) Review – ...
Dark7White Season 1 ##unicode ခင်ဗျားတို့သိလား… အိန္ဒိယက နိုင်ငံရေးကားတွေ သိပ်မိုက်တယ်ဆိုတာ… ခင်ဗျားတို့သိလား…. ဒီကားလေးက နိုင်ငံရေးနဲ့ လူသတ်မှု အရှုပ်တော်ပုံကားလေးဆိုတာ.. ခင်ဗျားတို့သိလား ဒီကားလေးရဲ့ ဇာတ်အိမ်သဘောတရားကို ဒီကားလေးအကြောင်းကိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သိသေးအုန်းမလဲ..ကျွန်တော်ပြောပြမယ်.. ဒီကားလေးမှာ ယူဒီဆိုတဲ့ တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဖွားကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်..ကောင်လေးသာပြောရတယ် သူက တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဆိုတော့ သူတက်နေတဲ့ ကောလိပ်မှာ သူက ဆရာကြီးပဲ..စော်ကလဲကြည်ပါ့.. အဲ့လိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ မျိုးရိုးဂုဏ်မောက်တဲ့ ယူဒီတစ်ယောက် ကျောင်းဝန်းထဲက ယောကျ်ားလေးဆောင်မှာ ညကြီးအချိန်မတော်ပါတီပွဲလုပ်တယ်..အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်က မလုပ်ရဘူး ဘာညာနဲ့ ပြဿနာတွေတက်ကြတာပေါ့… အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ပါတီလုပ်တဲ့နေရာကိုရဲတွေရောက်လာတော့တယ်..ယူဒီနဲ့ ရဲနဲ့ အချေအတင်စကားများကြပြီး ရဲက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နှစ်ယောက်ဘက်ကနေပြီး ယူဒီကို ဆော်လိုက်ရော… အဲ့ဒီမှာ ယူဒီ စတွေးတာက သူ့ရဲ့ တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဖြစ်နေတာက အခုခေတ်မှာ အသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့.. အဲ့လိုနဲ့ သူက နိုင်ငံရေးလောကထဲခြေစုံပစ်ဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်…သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ကောင်မလေးတွေကို အသုံးချပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားတော့တယ်..အဲ့လိုနဲ့ နိုင်ငံရေးက်ို တစ်စိုက်မက်မက်လုပ်နေရင်းက ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့ အချိန်မှာ သူဟာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရခဲ့တယ်…သို့ပေမယ့် ဝန်ကြီး အဖြစ်ရောက်ဖို့ရာ ကျမ်းကျိန်ဖို့သွားတဲ့လမ်းမှာ ဝန်ကြီးလောင်း ယူဒီတစ်ယောက် မထင်မှတ်ပဲ ထူးဆန်းစွာ အသတ်ခံခဲ့ရတယ်.. သူဘာကြောင့် အသတ်ခံရတာလဲ… ဘယ်သူတွေကများ သူ့ကို ...
Dark7White Season 1
bollywood series 34
Eng Series 94
Korea series 61
Alpha Premium © 2021 All rights reserved Disclaimer: Alphapremium.xyz is not in anyway associated with Gostream.is, Onlinemovies, Fmovies, Xmovies8, Putlocker sites. We do not host any videos on Alphapremium.xyz itself. Alphapremium.xyz is absolutely legal and contains only links to other third party websites like Youtube, Uptobox, Mediafire, Google, Picasaweb, Dailymotion, Openload, VK.com and many more which actually host videos. Alphapremium.xyz is not responsible for the compliance, copyright, legality, decency, or any other aspect of the content of other linked sites. If you have any legal issues please contact the appropriate media file owners or linked hosting websites. Alphapremium.xyz only and only provides links to third party video hosting sites which videos are uploaded by third party users. Alphapremium.xyz in no way affiliated with them nor intend to do that.